Yeyiphi eminye imiba yesiqhelo eza kunye nesihloko?
ikhaya / Yeyiphi eminye imiba yesiqhelo eza kunye nesihloko?
Ngezihloko, unokuba neempazamo kwiirekhodi zoluntu. Kunokubakho amatyala angaziwayo afakwe kwipropathi, apho umniniyo angazi ukuba banalo ityala. Kungaba lilize ngokungekho mthethweni elenzelwe le nkqubo kwaye ichaphazele uthotho lwezihloko. Kunokubakho i-forgeries, ii-easement, okanye umda wempikiswano ngovavanyo. Kunokubakho uhlobo oluthile lwentando engazange icandwe ngokuchasene nepropathi kwaye umntu unelungelo layo. Kunokubakho intabalala yezinto ezinokwenzeka, ezinokubulala ukuthengiswa kwezindlu kunye nomhlaba.
Kwenzeka ntoni xa kuvalwa impahla?
Ngokwesiqhelo, umthengisi wepropathi akafiki nakwezokuvalwa. Xa kuvalwa, umthengi uza kutyikitya onke amaxwebhu ahambelana nokuthengwa kwekhaya. Kudla ngokudityaniswa yiarhente yokuvala evela kwinkampani yangaphandle igqwetha okanye umthengi uqasha. Babonelela nge-inshurensi yesihloko kunye nokhangelo lwesihloko, emva koko amaxwebhu omthengisi ayingxenye yephakheji. Ukuba kukho imali, ke onke amaxwebhu obambiso asayiniweyo. Nje ukuba onke loo maxwebhu asayinwe, umbolekisi ubonelela ngenkxaso mali kwinkampani eyitayitile kwaye inkampani eyithumelayo isasaza imali kumthengisi.
Zithini iindleko zokuvala kunye nentlawulo endinokuthi ndihlawule?
Iindleko zokuvala zixhomekeka ekubeni ungumthengisi okanye umthengi. Umthengisi ngokwendleko unendleko zokuhlawula ityala lendlu kunye namatyala. Intlawulo yokuhlawula uxanduva lokwenyani luxanduva lomthengisi kunye neefizi zegqwetha. Kwicala lomthengi, une-inshurensi yesihloko, ukukhangela isihloko, kunye nentlawulo yokurekhoda amaxwebhu asayiniweyo.
Zithini ezinye zeengozi ezinokuthengiswa ngabantu ngokusebenzisa igqwetha?
Imicimbi yokusetyenziswa komhlaba inokutyhilwa, ukuba usebenzisa igqwetha kwaye uxela into ofuna ukuyenza nepropathi. Ukuba kukho itanki yeoyile emhlabeni, igqwetha linokuqinisekisa ukuba kukho i-inshurensi kuloo tanki umnini wangaphambili nokuba loo nto ingabanjiswa. Kunokubakho imiba yesihloko. Igqwetha linokuqinisekisa ukuba ityesi yempahla ilungile kwaye akukho buqhophololo okanye amatyala kwipropathi yakho.
Kubantu abaninzi, amakhaya abo lelona lithengayo likhulu baya kuze bayenze ebomini babo. Batyala imali, kwiimeko ezininzi, amakhulu amawaka eedola xa kuthengwa izindlu ezithengiswayo. Ukuchitha i- $ 1,000 kwigqwetha ukuze uqiniseke ukuba utyalo-mali olulungele wena aluzange lube yingqondo. Ufuna ukuba nengcali kwicala lakho ukuze uqiniseke ukuba awuzukuba nemicimbi emikhulu kamva eya kuthi ihlawule iindleko ezingaphezulu koko uza kuchitha kuloogqwetha.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi Imiba eqhelekileyo eneTayitile yearhente yokuthengisa izindlu kwi-NJ, i iseshoni yesicwangciso sobuchule lelona nyathelo lakho lilandelayo. Fumana ulwazi kunye neempendulo zomthetho ozifunayo ngokufowuna (973) 200-1111 namhlanje.